‘ह्याकर’ भन्ने बित्तिकै नराम्रो तरिकाले बुझ्ने एउटा गलत धारणा छ:: Naya Nepal
केही समय अगाडी नेपाली युवा तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता सौगात पोखरेलले इन्स्टाग्रामको बग (सुरक्षा कमजोरी) पत्ता लगाएर ६ हजार डलर पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । पढाइको हिसाबले उनी अमृत साइन्स क्याम्पसमा फिजिक्स पढिरहेका छन् । तर उनको रुची सूचना प्रविधिमा छ ।सौगातले एकवर्षमा बग पत्ता लगाएर फेसबुकबाट १६ हजार डलर पुरस्कार पाइसकेका छन् । उनै सौगात पोखरेलसँग साइबर सेक्युरिटी र अन्य विविध विषयमा आइसिटी समाचारका लागि कमल केसीले गरेको कुराकानीः
तपाईंको शैक्षिक पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न ?
म खासमा कक्षा ११ र १२ मा साइन्स विषय लिएर पढेको हुँ । त्यसपछि अहिले अमृत साइन्स क्यापसमा बीएससी फिजिक्स पढिरेहेको छु ।मेरो पढाइ र मेरो काम फरक छ । मेरा साथीहरू सूचना प्रविधि (आइटी)का विषयहरू पढेका कारण सूचना प्रविधिमा मेरो रूचि अलि बढी नै छ ।
पछिल्लो समय इन्स्टाग्रामको बग पत्ता लगाएर पुरस्कार पाउनु भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?
इन्स्टाग्रामले सन् २०१८ मा प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डेटा डाउनलोड गर्न दिने फिचर सार्वजनिक गरेको थियो, जसमार्फत फोटो तथा डाइरेक्ट म्यासेज लगायतका डेटा डाउनलोड गर्न मिल्छ ।मैले पनि सोही फिचरको सदुपयोग गरेर आफ्नो डेटा इन्स्टाग्रामबाट डाउनलोड गरेको थिएँ । जब मैले इन्स्टाग्रामबाट डेटा डाउनलोड गरेँ, तब त्यहाँ करिब १ वर्ष अगाडि नै डिलिट भएको फोटो तथा म्यासेज पनि डाउनलोड भएको थियो।इन्स्टाग्रामको नीति अनुसार हामीले डिलिट गरेका फोटो तथा म्यासेज ९० दिनसम्म इन्स्टाग्रामको सर्भरमा रहन्छ र त्यसपछि हट्छ । तर यो कुरा मेरो हकमा भने लागू भएन । करिब १ वर्षअघि नै डिलिट भएको डेटा पनि डाउनलोड भएको थियो । त्यसपछि मैले यसबारे रिपोर्ट गरेँ ।इन्स्टाग्रामको यो सुरक्षा कमजोरी मैले गत अक्टोबरमा पत्ता लगाएको थिएँ । सुरक्षा कमजोरी समाधान नभएसम्म यो तथ्य बाहिर ल्याउन नमिल्ने शर्तका कारण यो समस्या समाधान भइसकेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
रिवार्ड पाउँछु भनेर ह्याकिङ क्षेत्रमा लाग्नु भएको हो कि ? गर्दा गर्दै अवसर जुटेको हो ?
रिवार्ड पाउँछु भनेर नै त यो क्षेत्रमा लागेको होइन । यो क्षेत्रमा लाग्नुको मुख्य कारण भनेको सूचना प्रविधिमा मेरो रूचि भएकाले हो । मैले गर्दा गर्दै यो अवसर जुटेको हो, रिवार्ड पाउँछु, मिडियामा छाउँछु भनेर यसमा आएको होइन ।म ह्याकिङ क्षेत्रमा लाग्छु भनेर मलाई नै थाहा थिएन । यसमा करिअर राम्रो छ भनेर पनि मलाई थाहा थिएन । फिजिक्स पढिरहेको मान्छे अकस्मात् यो क्षेत्रमा आइपुगेको हुँ ।मैले बग पत्ता लगाएर एक वर्षमा फेसबुकबाट १६ हजार डलर पुरस्कार पाइसकेको छु । म बग खोज्छु भनेरै त लाग्दिनँ तर चलाउँदै जाँदा यस्तो अवसर जुट्यो ।
फिजिक्स पढिरहेको मान्छे आइटीमा यो सफलता पाउनुभयो, यस बाहेक अरू के के गर्नुभएको छ ?
मैले यसबाहेक मेरो स्टडी नामक वेबसाइट सञ्चालन गरिरहेको छु । हामी पढ्दाको समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो थियो ।त्यकारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य शिक्षा सम्बन्धित जानकारी, रिजल्ट लगायतको बारेमा सूचना प्रदान गर्न मेरो स्टडी नामक वेबसाइट सञ्चालनमा आएको हो ।त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नतिजा हेर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ टियु रिजल्ट नामक वेबसाइटको पनि विकास गरेको छु ।त्यस्तै कक्षा ११ र १२ को नोटहरूलाई समावेश गरेर पनि मोबाइल एपको विकास गरेको छु । मेरो स्टडीलाई ईलर्निङ प्लाटफर्ममा विकास गर्ने हामीले कामहरू गरिरहेका छौं ।
नेपालको आइटी क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ? यहाँ कस्तो अवसर छ ?
आईटी क्षेत्र आफैमा एउटा ब्रोड क्षेत्र हो । आईटी क्षेत्रमा थुप्रै अवसरहरू छन् । नेपालको आइटी क्षेत्र विकसित देशको जस्तै अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर पनि विस्तारै अगाडि बढ्न थालेको छ र यसको महत्व सबैले बुझ्दै गएका छन् ।अझै पनि हाम्रो देशमा मानिसहरू रिचार्ज कार्ड खरिद गर्नको लागि बजार जान्छन् । अब हामी पनि डिजिटलमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा मानिस अझै अभ्यस्त भइसकेका छैनन् ।अबको भविष्य भनेकै आइटी हो । कुनै पनि क्षेत्र अब अगाडि बढ्न आइटीको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकारी निकायबाट नै आइटीलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।तर आईटीको आवश्यकता छ है भन्ने कुरा अब बुझ्न थालिएको छ । आइटी क्षेत्रमा अवसरै अवसर छन् । तपाईं एप डेभलपर, वेबसाइट डेभलपर, ह्याकर, डेटा साइन्टिस्ट, प्रोग्रामर, सफ्टवेयर डेभलपर लगायतका अन्य विविध क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ ।
तपाईंको योजना जागिर खाने छ कि उद्यमी बन्ने ?
मैले भविष्यमा जे गरे पनि नेपालमै गर्छु । भविष्यमा यही गर्छु भन्ने त छैन् । तर पनि अहिलेको योजना भनेको आफूले जानेको कुरा युवाहरूलाई सिकाउने र मेरो स्टडीलाई ईलर्निङ प्लाटफर्मको रूपमा विकास गरी त्यसलाई नै स्टार्टअपको रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।नेपाली भाषामै नेपालीहरूलाई सिकाउने गरी हामी अहिले ईलर्निङ प्लाटफर्म विकासमा जुटिरहेका छौं । एजुकेशन भनेको निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुरूप ईलर्निङ प्लाटफर्मलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजनामा छौं ।
नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको अवस्था कहाँ छ ? कसरी काम गर्नुपर्छ होला ?
नेपालमा साइबर सेक्युरिटी जुन रूपले विकास हुनुपर्ने, त्यो अनुसार अझै विकास भएको छैन । समाजमा ‘ह्याकर’ भन्ने बित्तिकै नराम्रो तरिकाले बुझ्ने एउटा गलत धारणा छ ।सरकारकै वेबसाइटमा सुरक्षा कमजोरी भएका कारण धेरै साइटहरू ह्याक भइरहेका छन् । सरकारले बग पत्ता लगाउने कार्यक्रम ल्याएर उनीहरूलाई रिवार्ड दिने चलन विकास गर्‍यो भने सरकारी वेबसाइट ह्याक हुनबाट र हाम्रो देशको सूचना अरूले चोर्नबाट बचाउन सकिन्छ ।यसका साथै सरकारले साइबर सेक्युरिटीको विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा हामी प्रोग्रामिङको कुरा गर्छौं तर खासै साइबर सेक्युरिटीको कुरा गर्दैनौं ।त्यसैले पनि यसबारे सबैलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको विकासका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
आईटीमा जहाँ बसेर पनि अवसर पाइने रहेछ, तपाईं जस्ता विद्यार्थीलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
यो कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिका कारण अहिले हामी सबै घरमै बसिरहेका छौं । यो एउटा अवसर पनि आईटीमा काम गर्न डिग्रीको आवश्यकता पर्दैन ।आफूसँग शीप छ भने विश्वका जुनसुकै देशको काम पनि घरमै बसेर गर्न सकिन्छ । त्यसैले तपाईंहरू पनि यो फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर आफूले नयाँ सीप सिक्न सक्नुहुन्छ ।इन्टरनेट वा युट्युबमा सर्च गरेर आफूलाई मन परेको कुरा खोजेर सीप सिक्न सकिन्छ । आईटीका पनि धेरै क्षेत्रहरू छन् । त्यसैले यो फुर्सदको समयमा आफूलाई मन परेको कुनै एउटा क्षेत्रको बारेमा सीप सिक्न सकिन्छ ।